Fiomanana amin'ny fanomanana trano ratsy an'ny ankizy | GFUN
1. Ny antokon-taona ho an'ny Paradisa Fort Malle dia tokony hofaritana. Zava-misy amin'ny taona 0-6 tsara io, na miditra ao amin'ny toeram-pianarana fotsiny.
2. Ny faritra ao amin'ny Paradisa Fort Moe dia heverina ho tsara ihany koa. Raha kely loatra dia mety hisy fiantraikany amin'ny olana eo amin'ny fandraharahana maharitra. Tsy maintsy hodinihina tsara izy io araka ny volan'ny volany. Ny iray hafa dia ny mamatsy vola izay karazan-kilalao milalao zaza tsy maintsy ampitahaina ary hodinihina. Ny lapa taloha nentim-paharazana dia manana vidiny kely sy kely fifanarahana. Ny lapa vaovao lozisialy vaovao dia manana fifandraisan'ny ray aman-dreny, fiarovana sy fahadiovana, ary ny tontolo misokatra dia fahatsapana mazava. Ilaina koa ny mifidy ny toerana amin'ny fotoana mitovy. Ilaina ny fanaovana tombana ny tombotsoan'ny raharaham-barotra toy ny fivoaran'ny fifamoivoizana amin'ny manodidina ny fifamoivoizana manodidina. Tsara kokoa raha misafidy toeram-pivarotana lehibe, toeram-pivarotana lehibe, vondron’olona lehibe, sns, ary ny malaza dia mamaritra ny vola miditra.
3. Dingana iray manan-danja ihany koa ny fisafidianana ny mpanamboatra fitaovam-pahafinaretana amin'ny kitapo hafahafa zaza. Tsara indrindra ho an'ny mpampiasa vola ny mandeha any amin'ny orinasa hanaovana fitsidihana eny an-tsaha, hahitana ny toe-piainan'izy ireo sy ny haavon'ny toerana, ary ho toy ny kalitao famokarana, laza ary ny serivisy aorian'ny serivisy, sns. manao ireo andiam-pandaharana maromaro.
4.Ny orinasa GFUN dia manampahaizana manokana amin'ny famokarana fitaovana fialam-boly tsy am-pahefana, fitaovana fialam-boly rano, fitaovana fialam-boly rano, fitaovana fialam-boly ho an'ny ankizy, fitaovana fialam-boly ho an'ny ankizy, fitaovana fialam-boly ho an'ny ankizy any ivelany, fitaovana fialamboly ivelany ary fitaovana fanaingoana natao. Izahay dia orinasa mpiasan'ny fialam-boly feno feno, manome ny mpanjifa amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana, famolavolana, famokarana, varotra, fametrahana, serivisy ary serivisy mahazatra.
GFUN dia miarahaba ny mpanjifa hitsidika sy hifanakalo hevitra momba ny fiaraha-miasa. Afaka miantso anay ianao amin'ny fotoana rehetra raha manana fanontaniana.